मन र समझले प्रार्थना गरौं
कार्तिक ७, काठमाडौँ,
शान्ति र एस्थर एकदमै मिल्ने साथी थिईन । दुवै जना मण्डली जान्थे । केहिदिन देखि शान्तिलाई केहि कुराले पिरोली रहेको थियो । सो कारणले गर्दा उ आफ्नो मनमा शान्ति पाउन चाहन्थिन । यसैले उ आफ्नो मिल्ने साथी एस्थरकहाँ जान्छिन र आफ्नो कुरा बताएर एस्थर संगै बसेर प्रार्थना गर्छिन ।
शान्ति : प्रभु मलाई मनमा केहि दिन देखि यता अशान्ति छ । मलाई शान्तिले भर्नु होश ।
एस्थर : (शान्तिको लागी प्रार्थना गरीदिदै...) प्रभु शान्तिको मनलाई अशान्तिले भरिदिनु होश ।
जब प्रार्थना सक्यो, उनि दुई बीच निकै विवाद भयो । तब शान्तिले फेरी यसरि भनिन "तिमीले किन मेरो लागी यसरि प्रार्थना गरेकी ? तिमी त एक मेरो निम्ति साथी मात्र नभएर प्रभुमा हुर्काउने व्यक्ति हौ । नेतृत्व कर्मी हौ ।"
आफुले त्यस्तो नबोलेको भनेर दाबी गरे पनि अन्तमा एस्थरले शान्ति संग यो कुरा सुईकर्छिन् । धेरै छल फल भए पछी एस्थरले क्षमा मग्छिन शान्ति संग । किनकि त्यो प्रार्थनामा एस्थरको मन एकाग्रतामा थिएन । गल्ति एस्थरकै थियो ।
यस्तै एस्थरको जस्तै तपाइको प्रार्थना पनि हुन सक्छ जुन बोल्न पर्ने हो सो नभई उल्टो बोलेको हुन सक्छ । यस्तो हुनु चाही तपाइको मन एकाग्र नभएर हो । त्यसैले तपाईले कसरि प्रार्थना गर्नु हुन्छ त्यो ठुलो कुरा होइन तर तपाईले प्रार्थना गर्दा तपाईको मन र समझ कहाँ छ त्यो कुरामा भर पर्छ । तपाइले प्रार्थनामा बोलेको हरेक सब्दाले तपाइको साथी संगी, परिवार छिमेकी मण्डलीले प्रेरणा पाउनु पर्छ ।
कतै तपाइले गरेको प्रार्थनाले कसैको मन दुखेको त छैन ?
तपाइको प्रार्थना कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई पछार्ने भएको त छैन ?
अहिले को समयमा यस्तो प्रार्थनाहरु भई रहेको छ । जुन प्रार्थनाले कुनै - कुनै मण्डलीमा सदस्यहरु पातलिदै गएको छ । सायद एस्तो समस्या तपाइको मण्डलीमा पनि हुन सक्छ । त्यसैले तपाइले तपाईको प्रार्थना गर्ने तरिकामा फरक पन लेराउनु होश । बाइबलको पदहरुलाए दाबी गर्दै पबित्र आत्मामा अरुलाई उठाउने प्रेरणादाई प्रार्थना होश । असहारालाई सहारको महसुश भएको होश । कमजोरीलाई सक्ति पाएको महसुश होश । अनि सबैले शान्तिको आभास गर्न सकेको होश । - धन्यवाद ! प्रभुले तपाको प्रार्थना अवश्य सुन्नु हुन्छ ।